UMnu Kapil Narain ehlolela i-COVID-19 enkabeni yaseNanda eThekwini.
Umfundi WezobuDokotela Ubhekene Ngqo ne-COVID-19
Umfundi owenza unyaka wokugcina ezifundweni zobudokotela, uMnu u-Kapil Narain, usebenze wabhekana ne-COVID-19 ngokuhlola imiphakathi emasontweni amahlanu edlule.
Umkhankaso wakhe uyingxenye yohlelo lukahulumeni lokuhlola, okunguhlelo olungakaze lubonakale nolusukumela indaba yokubeka abasebenzi bezempilo emphakathi, phecelezi ama-community health workers (ama-CHW), ukuthi aphume engena ehlola abantu. UMengameli Cyril Ramaphosa umemezele ukubuthwa kwama-CHW alinganiselwa kuma-60 000 ezweni lonke ukunyusa izinga lokuhlola.
‘Ngenxa yokuqeqeshelwa ubudokotela, angikazwanga ukuhlala ngibukele umonakalo obangwa yi-COVID-19. Ekubhebhethekeni kobhubhane oluthwalise kanzima ezempilo nabasebenzi bezempilo, ngizibone nginomsebenzi wokuthi ngibambe iqhaza, ngivolontiye,’ kusho u-Nairan.
Lo mfundi uye kwa-Maternal, Adolescent and Child Health Institute (i-MatCH), inhlangano engenzi nzuzo, ukuyoqhuba umsebenzi wokuhlola. Ubeyingxenye yethimba laseNyakatho yaseThekwini elinamathimba angama-13 anama-CHW, abahlengikazi, odokotela, abashayeli nezigijimi zoMnyango wezeMpilo nezinhlangano eziningi ezingenzi nzuzo. Ngaleyo nkathi, usebenze ezindaweni ezehlukene e-Phoenix, oThongathi, KwaMashu, naseNanda.
‘Njalo ekuseni bekuqalwa ngemihlangano nawo wonke amathimba nabadidiyeli boMnyango wezeMpilo ehholo noma esikhungweni somphakathi kugcinwe imigomo yokuqhelelana. Lapho besinikwa imiyalelo ephathelene nezikhungo zokuhlola bese kuthi emva kwaloko siyolanda izinsiza zokuhlola, amarejista, izinto zokuzivikela, namafomu. Emva kwaloko bese sibheka indawo efanele kulezo zikhungo ezikhonjiwe. Bese ngigqoka izinto zokuzivikela, ngihlale emtholampilo ongumahambanendlwana ngenkathi ithimba libhala imininingwane, lilandela nalabo obekungenzeka ukuthi bathintane nomuntu othelelekile ngaphambi kokuthi bamthumele kimi ngizomhlola.
‘Bengihlola abantu abaphakathi kwama-50 nama-70 ngosuku. Abantu abaningi bebenexhala, kepha bengibamisa idolo ngithi ukuhlola kuyashesha. Ngaphezu kwalo, bengifafaza indaba yokugeza izandla ngendlela efanele, ukusebenzisa izihlanzi ezine-alkhoholi, ukuqhelelana nezamfonyo. Uma selishonile ilanga, amasampula abeshiywa e-National Health Laboratory Service (i-NHLS), bese sibika ngezibalo, sishiye amafomu kubadidiyeli.’
U-Narain ubone izinselelo eziningi. ‘Bekungahlelekile kahle kwezinye izindawo. Ekuhloleni kunobungozi obukhulu bokuthelelana kodwa besihlinzekiwe ngezimpahla zokuvikeleka. Ngaphezu kwaloko, isikhungo somphakathi sezempilo eNanda lapho ebesikade silahla khona izibi kwatholakala abanye abasebenzi bethelelekile, kwadingeka sivalwe, okuholele ekumisweni kokuhlola. Okunye futhi ngukuthi komunye umphakathi kuthiwa kwadunwa imoto yethimba – okukhombisa ingozi yokusebenza emphakathini.
‘Nakuba bekunezinselelo kodwa bekungumsebenzi omnandi nokukhuthazayo ukusebenza nama-CHW nabantu baseNingizimu Afrika basemiphakathini ehlukene. Ngithanda ukubonga i-MatCH noMnyango wezeMpilo ngokunginika leli thuba lokusebenza.’
Inombolo Yocingo Yamahhala Yase-UKZN Yokweseka Abafundi
Kudingidwe Ukucwasa Ngokobuhlanga Njengesithiyo Sokubumbana Kwesizwe Kwingosi Yokuxhumana Ngobuchwepheshe
I-UKZN Ithole Umshini Wokuhlola I-COVID-19 Ngokushesha